लिनक्स प्रयोग गरेर पुरानो कम्प्युटर कसरी पुन: प्रयोग गर्ने - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> मर्मत >> पुरानो लिनक्स कम्प्युटर पुन: प्राप्ति
उनीहरूले मलाई पुरानो कम्प्युटर, Acer Veriton L460 अपडेट गर्न छोडे। यो मूल रूपमा विन्डोज भिस्टा बिजनेस ओएमको साथ आएको हो, र अब यसमा विन्डोज installed स्थापना भएको छ। उनीहरू गुनासो गर्दछन् कि यो धेरै, एकदमै ढिलो हुँदै गइरहेको छ र किनकि यसको प्रयोग धेरै आधारभूत कार्यहरूको लागि हुने भएको छ, तिनीहरू यसलाई पुन: प्राप्ति गर्न प्रयास गर्न चाहन्छन्।
विन्डोज longer अब समर्थित छैन र यो कम्प्युटरले विन्डोज १० लाई सार्न सक्दैन। यो अप्रचलित भएको छ। कम से कम विन्डोज को एक समर्थित संस्करण को उपयोग गर्न को लागी
कम्प्युटर केवल ब्राउजि for र स्कूल कार्यको लागि प्रयोग भयो, पाठ सम्पादक शब्द, LibreOffice प्रयोग गर्नुहोस्। Pdf पढ्नुहोस् र केहि प्रिन्ट गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले पीसीको विशेषताहरू देख्नुभयो भने, यससँग १ जीबीको र्याम मात्र छ, जुन आज लगभग अप्रचलित छ।
विन्डोज वा लिनक्स
रहस्यमय उनीहरूले मलाई यो बिना नै लिनक्स राख्न भन्यो। त्यसैले म लाइट संस्करण खोज्न वा विन्डोज XP राख्न भूल भयो जुन लामो समय सम्म समर्थित छैन र पाइरेटेड सफ्टवेयर स्थापना गर्नु पर्छ। मलाई लाग्छ कि यसमा लिनक्स राख्नु ठूलो छ। यस अवस्थामा फाइदाहरू धेरै छन्।
लिगेसी र कम संसाधन कम्प्युटरहरूको लागि लाइटवेट लिनक्स वितरण
यसलाई आफैंमा लेख चाहिन्छ, तर यहाँ केहि विकल्पहरू छन्:
स्थापना लिनक्सको फाइदा
त्यहाँ धेरै छन् र म उनीहरूमा थप छलफल गर्नेछुaमा प्रकाश वितरण वस्तु.
Xubuntu लिनक्स परीक्षण गर्दै
यस पटक म जुबन्टु वा मांजारो एक्सएफसीई स्थापना गर्न बीचमा हिचकिचाउँदछु, जुन दुई वितरण हो जुन 512१२ एमबीको र्याम चाहिन्छ। त्यसैले यो सजिलैसँग काम गर्नुपर्छ।
मैले जुबन्टु स्थापना गर्न समाप्त गरें यसको स्थिर संस्करण १.18.04.०XNUMX मा। मन्जारोको रोलि release रिलिजले मलाई डराएको छ किनभने यो पीसीको विचार यो हो कि यो एकदम स्थिर छ कि तिनीहरू लिनक्स प्रयोग गरेर थकित हुँदैनन्। तिनीहरूलाई कुनै समस्या नदिनुहोस्।
त्यसैले हामी स्थापना संग जान्छौं। चरणहरू धेरै सरल छन्।
पीसी पहिले नै यसको ब्याकअपको साथ आएको थियो, त्यसैले यो कुनै डाटा बचत गर्न छैन र सबै सामग्री मेटाउन सक्छ।
Xubuntu को साथ USB सिर्जना गर्नुहोस्
स्थापना गर्न मैले एउटा सिर्जना गरेको छु Xubuntu iso को साथ ईचर प्रयोग गरेर USB बुटेबल। त्यहाँ एक बुटेबल यूएसबी सिर्जना गर्न धेरै तरिकाहरू छन् तर म वास्तवमै त्यो बहु-प्लेटफर्म अनुप्रयोग मनपराउँछु।
Xubuntu को ISO छवि डाउनलोड गर्नुहोस् तपाइँको वेबसाइट बाट
हामी ईथर डाउनलोड गर्दछौं, हामी यसलाई अनजिप र कार्यान्वयन गर्छौं, हामी यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्छौं।
Steps चरण भएको विन्डो खुल्छ। आईएसओ, यूएसबी र फ्ल्यास चयन गर्नुहोस्
पहिलो हामी आईएसओ छवि चयन गर्दछौं जुन हामीले जुबन्टुबाट डाउनलोड गरेका छौं, त्यसपछि हामी कुन युनिट हामी बुटेबल बनाउन चाहन्छौं चयन गर्दछौं। यसको लागि तपाईंले USB राख्नुपर्दछ, र सावधान रहनुहोस् यस चरणमा सावधान हुनुहोस् फरक हार्ड ड्राइभ को छनौट नगर्नुहोस् र सबै कुरा मेटाउनुहोस्। किनकि यसले ड्राइवलाई फर्म्याट गर्दछ तपाईले लिनक्स स्थापना गर्न चयन गर्नुभयो।
अन्तमा तपाईले फ्ल्यास गर्नुभयो! र तयार।
Xubuntu स्थापना गर्नुहोस्
एक पटक हामीसंग युएसबी तयार भएपछि हामी यसलाई स्थापना गर्न जानेछौं। यसको लागि हामीले यसलाई पीसीमा राख्यौं, र हामी यसलाई सुरू गर्दछौं। यदि महान USB बुट अप भयो भने, तपाईंले भर्खर जानुहुन्छ।
यदि यो USB बाट बुट गर्दैन भने तर यो सामान्य सक्रिय हुन्छ, यस अवस्थामा विन्डोज7लाई लोड गरेर तपाईंले BIOS प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र बाह्य डिस्कहरू पहिले लोड गर्न विकल्प परिवर्तन गर्नुहोस्।
BIOS सामान्यतया F2 थिचेर तपाईलाई खोल्ने बित्तिकै पहुँच गर्न सकिन्छ। यो प्रवेश नगरुन्जेल हामी F2 थिच्न जारी राख्छौं। केहि कम्प्युटरहरू वा ल्यापटपहरूमा F2 को सट्टामा यो Esc वा केही अन्य कुञ्जी हो, यदि तिनीहरूले काम गरेनन् भने तपाईंले गुगल खोजी गर्नुपर्नेछ वा तपाईंको मदरबोर्डको म्यानुअलमा कुन कुञ्जी BIOS प्रवेश गर्न प्रयोग हुन्छ।
यो कस्तो देखिन्छ
यो यस्तो देखिन्छ। आकर्षण जस्तै काम गर्दछ।
सत्य यो हो कि यो सुन्दर छ। मेनूहरू अलि सरल छन्, तर निस्सन्देह यदि हामी यसलाई प्रकाश दिन चाहन्छौं भने हामी ग्राफिक स्तरमा धेरै माग्न सक्दैनौं।
म आशा गर्दछु कि तपाईले रमाईलो गर्नुभयो, लिनक्स कोशिस गर्न तपाईलाई प्रोत्साहित गरियो र यदि तपाईसंग कुनै प्रश्न छ भने, एक टिप्पणी दिनुहोस्
दुई विषयहरू जुन मैले अर्को लेखमा गहिराइमा सामना गर्नुपर्दछ
पुरानो र कम संसाधन कम्प्युटरहरू वा ल्यापटपहरूको लागि उत्तम वितरणको बारेमा लेख सिर्जना गर्नुहोस्
लिनक्स वा विन्डोज वितरण स्थापना गर्न कसरी बूटयोग्य USB बनाउन सकिन्छ भनेर वर्णन गर्नुहोस्।
विभाग लिनक्स, मर्मत टिकट नेभिगेसन
"लिनक्सको साथ पुरानो कम्प्युटर पुन: प्राप्ति" मा ० टिप्पणीहरू
अगस्त,, २०१ 29 ११::० अपराह्न
1.1 विन्डोज वा लिनक्स
2 लिगेसी र कम संसाधन कम्प्युटरहरूको लागि लाइटवेट लिनक्स वितरण
3 Xubuntu लिनक्स परीक्षण गर्दै
3.1 Xubuntu को साथ USB सिर्जना गर्नुहोस्
3.2 Xubuntu स्थापना गर्नुहोस्
3.3 यो कस्तो देखिन्छ